Umculi webrashi, Ipeyinti yebrashi yeoyile, Watercolor Ipeyinti yebrashi-Fontainebleau
I-Nanchang Fontainebleau yokupeyinta izinto zeMveliso yezeMveliso, Ltd.
I-Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., ltd igxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kweebrashi zomculi, kubandakanya i-watercolor / ioyile / i-acrylic / iibrashi zokuhombisa kunye neebrashi zobuhle. Banophawu lwayo- iGolden Maple, ibisaziwa njengelinye lawona magcisa alungileyo e-China. Banikezela ngazo zonke iintlobo zeenkonzo ze-OEM, nazo zinokukunceda ukuba wenze ibrashi yakho kunye nebrand. Nokuba unedatha yebrashi, emva koko banokuyivelisa, ngokwesicelo sakho sokwenza iibrashi ezininzi ezahlukeneyo.
Abaqalayo bathenga njani i-watercolor yepeyinti yepeyinti yebrashi? Oku kulandelayo zezinye iiparameter ezibalulekileyo endizishwankatheleyo xa uthenga ezi brashi. Okokuqala, imilo yebrashi Ngokubanzi, ibhrashi ejikelezayo isetyenziswa kakhulu. Uninzi lwazo lungahlulwahlulwa, ke andizukungena kwiinkcukacha apha ....
Iindidi zeebhrashi zokupeyinta ezenziwa qho esihlala sizisebenzisa ekupeyinteni zezi zilandelayo: Uhlobo lokuqala yifayibha yendalo, yona ibristles. Kubandakanya i-bristles, iinwele zengcuka, iinwele ze-mink njalo njalo. Udidi lwesibini yifayibha yemichiza. Sihlala sisebenzisa i-nylon. I-Bristles entsha yokupeyinta ibrashi ithengiwe ukwenza ...
Indlela yokutsha Khupha enye yeebristles kwibrashi uze uyitshise ngomlilo. Kukho ivumba elitshayo ngexesha lokutsha, kwaye lijika libe luthuthu emva kokutsha. Le yeyona bristles yokwenyani. Iintsimbi zomgunyathi azinancasa okanye zinuka ivumba leplastiki xa zitshile. Emva kokuba ...
Malunga nefektri, ibisebenza ngaphezulu kweminyaka engama-30, inamava atyebileyo ekwenzeni ibrashi yepeyinti yomculi.
Ukutya kweBanga lokutya kwiCake
Ibrashi enkulu yokupeyinta imvelaphi
Ukupeyinta ebusweni nasemzimbeni
Ibhrashi encinci kwiikiti zeGaraji